राष्ट्रीय Archives - Page2of 13 - SudurNews
Written by:EditorPosted on: August 13, 2017
काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न माग राखेर अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको समझदारी संसदीय समितिले पालना नगरेपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीका केही माग थप समेट्ने गरी मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको थियो। बालुवाटारमा नयाँ कलेजले सम्बन्धन पाउने प्रमुख आधार बनाउँदा अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्षको सट्टा दुई वर्ष राख्ने सहमति जुटेको थियो। तर त्यो गणना ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति…
"यस कारण भत्कियो सहमति, ‘चिटिङ’ गरेर विधेयक पारित"
श्रावण २९, २०७४- पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पथलैया– निजगढ सडकको दुधौरा पुल भासिएको छ । आइतबार बिहान पुल भासिएपछि यातायात ठप्प भएको छ । ठूला सवारी बाटोमै रोकिएका छन् । तीन वर्ष अगाडि पनि यो पुल भासिएको थियो । यसैगरी पथलैया हेटौंडा सडकको चुरियामाईमा पहिरो खसेर बाटो पूर्वपश्चिम राजमार्ग अबरुद्ध भएको छ । निजगढस्थित लालबकैया खोलाको ड्याम जंगलतिर पानी पस्न सुरु भएको छ ।
"पुल भासिदा पुर्ब पश्चिम राजमार्ग अबरुद्ध"
Written by:EditorPosted on: August 11, 2017
श्रावण २७, २०७४- बबई नदीले कटान गर्दा दशगजामा रहेका पाँचवटा सहायक सीमास्तम्भ बगेका छन् । बाढीले मुख्य सीमास्तम्भ ५८ को गुलरिया नगरपालिका–१० मस्जदियास्थित सहायक स्तम्भ बगाएको हो । वर्षेनी स्तम्भ बगिरहँदा सीमा पनि मिचिएको स्थानीयको गुनासो छ । ०५१ सालको बाढीले ५८ नम्बर सीमास्तम्भ बगाएको थियो । पॉच वर्षअघि मस्जदीयामा रहेको ६७०/८ नम्बरको सहायक स्तम्भ बगाएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । स्थानीय सुवेदार यादवले नदीले स्तम्भ बगाएपछि सीमा छुट्याउन समस्या भएको बताए । एक साताअघिको…
"बाढीले सीमा स्तम्भ बगे, फेरी सिमा मिचिने डर"
उपत्यकामा दिउँसो मालबाहक ट्रक चलाउन नपाइने
काठमाडौँ, साउन २७ गते । आगामी भदौ १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथमा मालबाहक सवारीसाधन चलाउन नपाइने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखा मालबाहक सवारीसाधनलाई बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । सहज ट्राफिक व्यवस्थापन, सहज आवागमन र सडक दुर्घटनामा न्यूनीकरण गर्न रोक लगाउनुपरेको विभागले जनाएको छ । व्यवसायीसँग शुक्रबार छलपल गरी सो निर्णय गरिने भएको छ । खानेपानी तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने बाहेक…
"उपत्यकामा दिउँसो मालबाहक ट्रक चलाउन नपाइने"
श्रावण २६, २०७४- चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राख्दै ११ औं पटक आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागलाई लत्याउँदै संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले आधा दर्जन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ । समितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने डा. केसीको मागको ठीकविपरीत कानुन बनाउन लागेको हो । सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि परेको संशोधन टुंगो लगाउन गठित…
"डा. केसीका माग लत्याउँदै, नया चिकित्सा शिक्षा विधेयक"
Written by:EditorPosted on: August 9, 2017
बाबियाचौर(म्याग्दी), साउन २५ गते । सदरमुकाम बेनीमा चटपटे बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बेनी नगरपालिकाको कार्यालयले बजारमा चटपटे बिक्री गर्न रोक लगाएको हो । स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने अखाद्य पदार्थ मिसावट गरी चटपटे बनाउने गरेको पाइएपछि प्रतिबन्ध लगाइएको बेनपा– ७ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । “सडकमा ठेला राखेर व्यापार गर्दा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । साँघुरा सडक र गल्लीमा ठेलामा राखेर बिक्री गरिने चटपटे खानेको भिडले सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ ।…
"चटपटे बिक्रीमा प्रतिबन्ध"